Dood ka dhalatay kala qayb-sanaan ka dhex-jirta Ciyaar-yahanada Brazil – Radio Daljir
Juunyo 21, 2015 1:07 b 0
Axad, Juun 21, 2015 (Daljir) â€” Sawiro ay soo bandhigtay jariirada Daily Mail oo laga soo qaaday xulka England ee daâ€™dooda ka hooseyso 21 sanno jirada ayaa dhaliyay dood kulul oo ku saabsan isdhaxgalka bulshada kala midabada duwan ee dalka Ingariiska iyo hadii weli uu jiro isir naceyb.
Sawirada ayaa muujinaya ciyaartoyda cadaanka iyo kuwa madowga oo mar walba kala soocan islamarkaana qolo walba ay saaxiibo ka dhigatay qolada kale ee ku midabka ah. Waxa ay sawirada ka bilaabanayaan miiska cuntada iyadoo ciyaartoyda madowga ah ay miis gaar u fadhiyaan si la mid ah kuwa cadaanka.
Qolka jir dhiska ayay sidoo kale taasi ka muuqataa iyo xitaa barkada dabaasha, waxaana ay Daily Mail ku doodeysaa in ciyaartoy sidaan u daâ€™ yar oo qaabkaan u dhaqmaya inay muujineyso in Britain aysan weli guul ka gaarin isdhexgalka bulshada kala midabka duwan.
Laakiin dooda ay dhalisay sawiradaan ayaa aheyd in dadka qaarkiis ay ku doodayeen in hadba dadka isfahma ama isku dhaqanka ah inay israadsadaan oo aysan arintaan wax xiriir ah la laheyn isir naceyb ama cunsurinimo.
Qof ayaa soo qoray: â€œCaadiyaan waxaan xiriir la sameynaa dadka aan wax wadaagno, tusaale ahaan dadka aan aaminsanahay inay fahmayaaan dhaqankeena, halka aan ka soo jeedno, qoysaskeena, taariikhdeena iyo caqiidadeena. Kaliya qof cunsuri ah ayaa isku dayaya inuu arintaan iska caadiga ah ka dhigo mid naceyb ah.â€
Mid kale ayaa isna yiri: â€œWaxba ma ahan haddii ay ku kala qeybsan yihiin tababarka ilaa iyo inta ay koox isku duuban ku yihiin garoonka, waana halkaas muhiimada.â€
Qof kale ayaa isna qoray: â€œMiisas kala duwan waa ay fariisan karaan, waxaana ay barkada dabaasha kaga dabaalan karaan dhinacyo kala duwan, laakiin sidaasi oo ay tahay waa ay is dhunkan doonaan waana ay isku soo boodi doonaan marka uu midkood gool dhaliyo!â€
Mid kale ayaa isna yiri: â€œWaxaan xusuustaa buug soo baxay sannado ka hor oo looga hadlay sirta kubada cagta, waxaana uu si faahfaahsan uga hadlayay sida ciyaartoyda ay isku raadsadaan jinsiyad ahaan. Isdhexgalka dhaqamada kala duwan weli ma aysan shaqeynin.â€